तेन्दुलकरलाई गुरुको त्यो झापड, जसले उनको जीवनमा ठूलो मोड ल्याइदियो  – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
एजेन्सी । भारतका महान् क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरका क्रिकेट गुरु रमाकान्त आचरेकरले उनलाई मैदानी अभ्यासको भट्टीमा जलाई–जलाई क्रिकेट जगत्का हीरा बनाएर निकालेका थिए । आचरेकरले आफ्नो स्कुटरमा राखेर सचिनलाई एकै दिनमा चार–चार म्याच खेलाउन लाने गर्थे । सचिन स्कुलपछि खाजा खाएर अभ्यासका लागि मैदानमा पुग्थे । मैदानमा गुरु आचरेकरले उनलाई कठोर अभ्यास गराउँथे ।
एक दिन गुरु आचरेकरले सचिनलाई एउटा जुनियर म्याचमा सहभागी हुन पठाए । तर, सचिन गुरुको आज्ञा पालना नगरी आफ्ना साथीहरूसित आफ्नै स्कुलको सिनियर टोलीको खेल हेर्न वाङ्खडे क्रिकेट मैदान पुगे । संयोगले उनका गुरु आचरेकर पनि त्यही मैदानमा थिए । सचिनले गुरुलाई देखे ।खाजा खाने समयमा सचिन आफ्नो टिफिन बक्स लिएर गुरुलाई भेट्न गए । गुरुले पहिल्यै सचिनलाई देखेर उनले आजको म्याच छाडेको बुझिसकेका थिए । तैपनि, उनले सचिनसित सोधे– तिम्रो म्याच कस्तो भयो ? तिम्रो प्रदर्शन कस्तो रह्यो ? तिमीले कति रन बनायौ ?
सचिनले इमानदारीपूर्वक सत्य स्विकार्दै भने– गुरु, आज म म्याचमा सहभागी हुन गइनँ । म यहाँ स्कुलको सिनियर टोलीका लागि ताली बजाएर हौसला बढाउन आएँ । सचिनको जवाफ सुन्नासाथ गुरु आचरेकरले उनको गालामा जोडले एक थप्पड हिर्काए र भने– तिम्रो काम अरूका लागि ताली बजाउने होइन, आफ्ना लागि अरूलाई ताली बजाउन बाध्य पार्ने हो । सचिनको जीवनमा त्यही एक थप्पडले ठूलो मोड ल्याइदियो । त्यस दिनदेखि उनले मन लगाएर अभ्यास सुरु गरे । आखिर उनको निरन्तरको अभ्यास र बेजोड प्रतिभाले संसारलाई ताली बजाइरहन बाध्य बनाइछाडे ।
तेन्दुलकरको जन्म राजापुरको मराठी ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो । उनको बुवा रमेश तेन्दुलकर चिनिएका कथाकार थिए भने आमा रजनी एक जीवन विमा कम्पनीमा कार्य गर्थिन् । सचिनको नाम उनको बुवाले आफ्नो मनपर्ने सङ्गीतकार सचिन देव बर्मनको नाममा राखेका थिए । उनको ठुलो दाई अजीत तेन्दुलकरले सचिनलाई क्रिकेट खेल्नका लागि प्रोत्साहित गरेका थिए । सचिनको एक भाई नितिन तेन्दुलकर र एक बहिनी सविता तेन्दुलकर छन् ।सन् १९९५ मा सचिन तेन्दुलकरको विहे अञ्जली तेन्दुलकरसँग भयो । सचिनको दुई छोराछोरी छन् – सारा र अर्जुन ।
तेन्दुलकर (जन्म २४ अप्रिल १९७३) भारतको भुतपूर्व खेलाडी र कप्तान हुन । उनको जन्म भारतको मुम्बईमा भएको हो । सचिन विश्व क्रिकेटको इतिहासमा विश्वकै सर्वश्रेष्ठ ब्याट्सम्यानहरूमा गनिन्छन् । उनले सन् १९८९ मा पाकिस्तान विरुद्ध कराचीमा भएको टेस्ट खेलबाट आफ्नो खेल जीवनको प्रारम्भ गरेका थिए। उनले टेस्ट तथा एकदिवसीय क्रिकेट गरी दुवैमा सर्वाधिक रन तथा शतक बनाएका छन् । उनले टेस्ट क्रिकेटमा ४९ शतक तथा एकदिवसीय क्रिकेटमा ५१ शतक बनाएका छन् । उनी पुरुष समूहको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाउने पहिलो खेलाडी हुन् । उनी टेस्ट क्रिकेटमा सबैभन्दा धेरै १५,९२१ रन बनाउने एक मात्र खेलाडी हुन् । एकदिवसीय म्याचहरूमा पनि उनलाई सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान प्राप्त छ । उनले आफ्नो पहिलो प्रथम श्रेणी क्रिकेट म्याच मुम्बईको लागि १४ वर्षको उमेरमा खेलेका थिए ।
तेन्दुलकरले क्रिकेट खेलमा गरेको योगदानको कदर स्वरूप भारत सरकारले सन् १९९४ मा अर्जुन पुरस्कार, सन् १९९७ मा भारतको सबैभन्दा ठुलो खेल सम्मान राजीव गान्धी खेल रत्नका साथै सन् १९९९ र सन् २००८ मा क्रमसः पद्म श्री र पद्म विभूषणले सम्मानित गरेको थियो । सन् २०१३ नोभेम्बर १६ मा आफ्नो क्रिकेट जीवनको अन्तिम म्याच सकेको केहीबेरमै प्रधानमन्त्री कार्यालय ९भारत०ले उनलाई भारतको सबैभन्दा नागरिक सम्मान भारत रत्नले सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारत रत्नले सम्मानित हुने हालसम्मका सबैभन्दा कान्छो र पहिलो खेलाडी हुन् ।
सन् २०१२ डिसेम्बरमा, तेन्दुलकरले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे । उनी ट्वान्टी२० क्रिकेटबाट अक्टोबर २०१३ मा सन्यास लिए यसै प्रकार सचिनले सन् २०१३ नोभेम्बर १६ मा मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध आफ्नो जीवनको २००औँ तथा अन्तिम टेस्ट म्याच खेलेर क्रिकेटको सबै स्वरुपबाट सन्यास लिएका थिए । तेन्दुलकरले ६६४ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्याच खेलेर जम्मा ३४,३५७ रन बनाएका थिए ।
सन् २००९ मा भारतको ग्वालियरमा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध एक एकदिवसीय क्रिकेटमा नट आउट २०० रन बनाए । उनि अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेलमा २०० रन बनाउने पहिलो खेलाडी हुन् ।